Karlsson Riverside Ap. 8 min ukuhamba ukuya kwiMain park
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGeno
Eli gumbi lithandekayo ligumbi lokulala libekwe kufutshane neBorjomi Park (imizuzu eyi-8 yokuhamba), eyona ndawo inomtsalane kubakhenkethi baseBorjomi. inamagumbi okulala ayi-2 kunye negumbi lokuhlala elineKitchen kunye nebhedi yesofa elala ngokukhululekileyo abantu aba-2.
kwiTotal Apartment inokwamkela iindwendwe ezi-6. Xa uvule iifestile uya kuva umlambo uqukuqela kwaye ujonge iintaba ezimangalisayo ukusuka efestileni ngelixa uphefumla ioksijini ecocekileyo, ke oku kunokuba lolona nyango lomphefumlo lungcono kuye nawuphi na umntu)
Ikhaya leyure liphakathi kumbindi wedolophu. Vala ukuhamba Ukusondela kwipaki enkulu ebonelela ngemithombo yeBorjomi kunye namanzi akrakra, ukuya kwiindawo zokutyela / iibhari, iivenkile njl.. isenza indawo ephambili kwaye iqinisekisa ukuhlala kwakho ngokukhululekileyo kunye nokunethezeka.
eyona nto inokuba yinto engalunganga, ngelixa kwabanye inokuba ngumthambo olungileyo - akukho lift endlwini kwaye sibekwe kumgangatho we-5.
4.85 ·Izimvo eziyi-41
4.85 · Izimvo eziyi-41
Nawuphi na uMsebenzi othi iBorjomi izise kwikhaya layo elikufutshane nawe.
apha ungenza iHikink, Ukuloba, ukukhwela ihashe, uKhenketho lweJeep, unyango lwe-Spa njl.
Ebusika, abantu abaninzi abanomdla kwi-Skying, bakhetha ukuhlala e-Borjomi kuba indawo yokuphumla yase-Bakuriani ifumaneka kuphela kwi-30 min drive ukusuka kuthi kwaye i-Bakuriani ngokwayo igcwele indawo enengxolo ye-amd, ngoko ke ukuba awunangxaki yokuqhubela phambili nokubuyela umva nge-30. min indlela nganye ke lukhetho olungcono lokonwabela iskyimg eBakuriani kwaye ulale eBorjomi.
Umbuki zindwendwe ngu- Geno